Budata GTA 5 (Grand Theft Auto 5) maka Windows
Free Budata maka Windows (72.41 GB)
Budata GTA 5 (Grand Theft Auto 5),
Rockstar, onye okike nke usoro GTA, wepụtara Tanya Nchekwa onwe 5, egwuregwu ikpeazụ nke usoro GTA, ma ọ bụ GTA 5 na nkenke, maka PlayStation 3 na Xbox 360 na Septemba 2013.
GTA 5 Gameplay Nkọwa
Rockstar kwuputara na June 2014 na ọ ga-ahapụ PC nke egwuregwu ahụ mgbe nsụgharị nsụgharị, ma kwupụta na ọ ga-ahapụ ụdị GTA 5 PC na ọdịda nke 2014, dịka ọ dị na egwuregwu GTA gara aga. The GTA 5 PC version, nke a na-atụ anya nke gamers, ga-mpụta mbụ na GTA Online mode na console Player ebudatara mgbe egwuregwu tọhapụ na niile mmelite wepụtara maka egwuregwu.
Nnukwu ohi Nchekwa onwe 5, nke nwere ụwa mepere emepe kachasị ukwuu na egwuregwu Rockstar etolitela, gụnyere mgbanwe dị egwu ma e jiri ya tụnyere egwuregwu ndị gara aga na usoro. Na Tanya Nchekwa onwe 5, anyị anaghịzi achịkwa otu dike. E nyere anyị ohere ijikwa ndị dike 3 dị iche iche ma gbanwee netiti ndị dike a dịka anyị chọrọ. Dike ọ bụla nwere akụkọ ndụ pụrụ iche na ikike ha pụrụ iche. Eziokwu ahụ bụ na ndị dike nwere ikike dị iche iche na-agbakwunye ọtụtụ na obi ụtọ na egwuregwu ahụ.
Nzụlite nke ndị dike anyị na GTA 5, nke na-ewere ọnọdụ na mpaghara Los Santos na Blaine Country, bụ ndị a:
Michael bụbu onye nwere ọkaibe na-apụnara mmadụ ego nụlọ akụ noge gara aga. Ninwe ndụ ezinụlọ dị egwu, Michael laghachiri noge ochie ya na GTA 5.
Trevor, otu nime ihe ndị na-atọ ọchị na egwuregwu ahụ, bụ psychopath nke na-enweghị ike ibi na unyi ma nwee iwe a na-achịkwaghị achịkwa. Eziokwu ahụ bụ na Trevor bụ enyi ochie nke Michael na-enye ya nnukwu akụkụ na akụkọ ahụ.
Franklin, onye nwere mmasị nụgbọ ala, bụ nwa okorobịa na-eto eto nke na-enwebeghị ihe jikọrọ ya na mpụ. Ndụ Franklin gbanwere mgbe ọ zutere Michael na ọ banyere nime mpụ.
Tanya Nchekwa onwe 5 na-enye ndị egwuregwu egwuregwu nnwere onwe dị egwu. Nime egwuregwu egwuregwu sara mbara, ị nwere ike iji ụgbọ ala dịka helikopta na ụgbọ elu jet, yana ụgbọ ala dị ka ịnyịnya ígwè, ọgba tum tum, ụgbọ ala, bọs na tankị. Na mgbakwunye, na egwuregwu GTA ọhụrụ, nadịghị ka egwuregwu ndị gara aga nke usoro ahụ, anyị nwekwara ike ịmaba mmiri nokpuru mmiri. Ọ bụ ya mere anyị kwesịrị iji kpachara anya na sharks noké osimiri.
Tanya Nchekwa onwe 5 ndịna-emeputa ga-ukwuu mma na PC version nke egwuregwu. E jiri ya tụnyere ụdị egwuregwu nke PlayStation 3 na Xbox 360, atụmatụ ndị dị ka nkwado mkpebi dị elu, mkpuchi dị elu dị elu, na mbara igwe nwere ohere na-echere anyị na egwuregwu ahụ.
Na Tanya Nchekwa onwe 5 anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ịhazi maka anyị nwere ike ịhazi ndị dike anyị. Anyị nwere ike ịnakọta uwe na ngwa dịka akpụkpọ ụkwụ, mkpụmkpụ, uwe ogologo ọkpa, uwe elu, t-shirts, okpu na iko na egwuregwu ahụ wee tinye ha na akwa uwe anyị. Notu aka ahụ, anyị nwere ike ịme nnukwu ngwa agha.
PCdị PC nke Grand Theft Auto 5 ga-abịa na ngwa nrụzi vidiyo nke ga - enyere gị aka ịmepụta ihe nkiri iji eserese ị na - ejide na egwuregwu.
GTA 5 Download na nwụnye Nzọụkwụ
Cheta na: Younwere ike ibudata Tanya Nchekwa onwe 5 na kọmputa gị site na-egbu osisi na gị Social Club akaụntụ na-enyemaka nke GTA 5 Mbido faịlụ. Iji na-egwu egwuregwu, ị ga-azụrịrị egwuregwu ahụ wee rụọ ọrụ egwuregwu ahụ site na akaụntụ Social Club gị. Tụkwasị na nke a, anyị gosipụtara echiche anyị banyere egwuregwu ọhụrụ ahụ ga-abịa nisiokwu anyị na njikọ ahụ mgbe a ga-ahapụ GTA 6.
GTA 5 (Grand Theft Auto 5) Ụdịdị
Nha faịlụ: 72.41 GB
Mmepụta: Rockstar Games
Kacha ọhụrụ na: 15-01-2022